Ukuhlaziywa kweKhitshi eliNgekhoyo kwenziwa nge-9 yeePhepha zoQhakamshelwano ezivela kwiAmazon - Iimpawu Zekhaya
Ukuhlaziywa kweKhitshi eliNgekhoyo kwenziwa nge-9 yeePhepha zoQhakamshelwano ezivela kwiAmazon
Nokuba ukhona ndihlala kwirente okanye awufuni splurge kwiprojekthi yokulungiswa, usenokwakha indlu yamaphupha ebhodi yePinterest- njengoko kungqinwe nguTersey Regan, oguqukele ebumnyameni ikhitshi Kwindlu yakhe yaseHoboken, eNew Jersey ukuya kwindawo eqaqambileyo, enezikhonkwane eziphezulu zePinterest ezenziwe.
Engonwabanga ngumbala obomvu nomdaka we-mosaic backsplash kwirente yakhe, uTersey wamisela isisombululo sethutyana esinokuguqula indawo. Njengoko kuchaziwe kuye Ibhlog , UTersey ufumene izikhombisi ezimhlophe zokubamba ezijongeka njengethayile yangaphantsi. Emva kokuvavanya amaphepha ambalwa kwaye eqonda ukuba kulula kwaye kujongeka kukuhle, wayigqiba le projekthi.
Okulandelayo: Imiphezulu yeetafile emnyama. Ngephepha lokudibanisa leemabhile alifumeneyo IAmazon -Ixabisa kuphela i-9 yeedola ku-6.5-unyawo-iTersey ithathe isigqibo sokuba iya kuba linyathelo lakhe elilandelayo. Ngelixa kubonakala kungakholeki, ungaphazami. UTersey uyavuma ukuba kuye kwafuneka ayenze kwakhona amaxesha ambalwa ukuze asuse amaqamza omoya kwaye enze iincam zokubala zingabinamthungo. Ekugqibeleni, bekufanelekile.
Ke, ewe, ndenze nje uku-odola zonke izinto eziyimfuneko ukukopa oku kwikhitshi lam lokurenta. Ndicebisa ukuba wenze okufanayo:
Khuphela ukulungiswa kwe-DIY
Iingcamango ezingama-35 ezilula zokuHombisa iiHlobo
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi kwiNguquko yeOfisi yekhaya
Njani abaYili abangama-20 behombise iVilla eyodwa
Esi sikolo saLungiswa kwakhona esiNdlu Jonga Ngaphakathi kwiNdlu yeeNdwendwe eziDlamkileyo e-LA
Eli gumbi lokuhlambela ligcwele amaqhinga okuGcina indawo ngaphambi nasemva: Abaphenduli bokuqala bafumana iRosos yasekhaya
Igumbi lokulala eliDlamkileyo-Udibana-neKhaya-eOfisi yokwenza
I-Evette Ríos Yakha eyona Dekhoni yokugqibela
Ikhitshi elitsha kraca kwiinguqu ezi-3 ezincinci
I-55 yee-Chic ngobuhlanti IKhitshi ebuyela umva
Le Bask ingqina ukuba neebhegi zephepha zinokuba ziintle
Iindlela ezili-11 zokuNwabisa ngokuNgcolileyo eziKhombisa kwiKhitshi lakho
Yeyiphi into yokuhlaziywa kweKhitshi ngokwenyani yeendleko ngo-2020
Ukulungiswa kweKhitshi yeVidiyo
yelizwe.lampoons iikrisimesi iikowuti
izindlu ezincinci imibono yokuhombisa
ezona zityalo zide zangaphakathi zintle